निषेधाज्ञामा गाउँ फर्किएका विद्यार्थीलाई एस्तो सरप्राईज, यसरी गराइदैछ स्थगित परीक्षा !! – Khabar28media
निषेधाज्ञामा गाउँ फर्किएका विद्यार्थीलाई एस्तो सरप्राईज, यसरी गराइदैछ स्थगित परीक्षा !!
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्रिविले विद्यार्थीको पायक पर्ने केन्द्रबाट परीक्षा लिने मोडालिटीमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हो । कोरोना महामारीका कारण स्थगित स्नातक तह प्रथम वर्षको वार्षिक परीक्षा अनलाइनबाट सम्भव नदेखिएपछि विद्यार्थी जुन जिल्लामा पुगेको छ त्यहीँबाट परीक्षा लिने मोडालिटी बनाइएको हो । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
Previous Article मलाई बधाई दिने सबै नेपालीले अमेरिका घुम्न पाउने छ्न..
Next Article बैंकका ऋणीहरुका लागि अत्यन्तै खुसीको खवर !! सबैले सक्दो सेयर गरौ